FacebookCollection.org| On Air mm
Facebook Collection . Org beta
Media & Journal
Myanmar Male Singer
Myanmar Female Singer
Myanmar Books, Magazines, Articles, Library.
Myanmar E -book for Android (Epub)
On Air mm
စကားဝါမြေ အွန်လိုင်း စာကြည့်တိုက်
နည်းပညာ စာအုပ်များ စုစည်းမှု
Millions of Amazing Pictures
Education Digest Journal
ငွေဈေး ၊ ရွှေဈေး
အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုသိုလ် အဖွဲ့
အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ
Myanmar Exchange Business Information
Tarot နှင့် သင့်ကံကြမ္မာ
ဗေဒင်ပညာ - Astrology
Home » Myanmar Ebooks » On Air mm
US၊S'pore တို့မှ ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဈေးနှုန်း
Like လုပ်ထားခြင်းဖြင့် လွယ်ကူစွာဝယ်ယူ
နိုင်ပါပြီနော်....US နှင့် Singapore မှလာသည့်ပစ္စည်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။Posted 24 minutes agoSmart Choice FashionView this post on Facebook MEZO ပိန်ဆေးကို အမေရီကန်နိုင်ငံမှာ ထုတ်လုပ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှ တရားဝင်ဖြန့်ဖြူးတာ ဖြစ်ပါတယ်. ကျား.မ မရွေး အသက် ၁၈နှစ်အထက်မှ စတင်ပြီးသောက်သုံးနိုင်ပါသည်..
၁ဗူးမှာ ဆေးလုံး ၃၀ ပါပါတယ်. ၅သောင်းကျပ်ပါ.
-- ဂျင်စင်းနှင့် သဘာဝသစ်သီးများမှ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် လူကို ဆိုးကျိုးမဖြစ်စေဘဲ ခန္ဓာကိုယ်မှ အပူအပုပ်. အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ဝမ်းသွားလျှင် အဆီများ ပါသွားပါတယ်. ဝမ်း၁နေ့ကို ပုံမှန် ၁-၂ခါတော့ သွားပါတယ်. ပုံမှန်ပါပဲရှင်..
--အစာအိမ်ရောဂါ ရှိသူများလဲ သောက်သုံးနိုင်ပါသည်..
-သောက်သုံးပုံမှာ မနက်စာမစားခင် ၁၅-၂၀ မိနစ်ခန့်ကြိုတင်ပြီး MEZO ၁လုံးသောက်ရပါမယ်. နေ့စဉ်စားတဲ့ အစာကို ပုံမှန်အတိုင်းစားနိုင်ပါတယ်.
-ရေများများသောက်ပေးရပါမယ်. ၁နေ့ကို ရေ ၂-၄လီတာလောက်တော့ သောက်ပေးရပါမယ်.
၁လကို ၈-၁၅ ပေါင်မှ ကျပါတယ်။ အသားအရေကိုလဲ ကြည်လင်စေပြီး ဖြူစေပါတယ်
### အထူးသတိပြုရန်.. ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ. သွေးတိုးသမားများ. ဆီးချိုရောဂါရှိသူများ. နှလုံးရောဂါရှိသူများ... သောက်သုံးရန်မသင့်ပါ
-- အော်ဒါ မှာယူပြီး ၁၅ရက်စောင့်ရပါမယ်. preorder ပါ.
အော်ဒါမှာယူလိုသူများ အမည်. ဖုန်းနံပါတ်.နေရပ်လိပ်စာ. ဝယ်ယူလိုသည့် အရေအတွက်ကို facebook message ချန်ထားခဲ့ပါနော်. ပစ္စည်းရောက်လျှင် အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါသည်. မြို့နယ်အလိုက်ပို့ခ ပေးရပါသည်..
-- ၂ဗူးအထက်ဝယ်ယူသူများ free delivery ပို့ပေးပါတယ်. နယ်မှ မှာယူသူများ ဘဏ်မှ ငွေလွှဲပြီးမှ ပစ္စည်းအော်ဒါလက်ခံပါတယ်.Super Diet!Posted 1 hour, 37 minutes agoMEZO MyanmarView this post on Facebook Samsung Galaxy S5
Model - SM-G900H
Colour - White, Black, Blue
Screen Size (inches) - 5.10
Resolution - 1080x1920 pixels
Processor - 1.9GHz Quad Core
Camera - 16-megapixel
Front camera - 2.1-megapixel
Android - 4.4.2
Battery - 2800MAH
***Special Price - 620,000ks***
Address >>> Room No.15, GF, Mya Yar Gone Street, Shwe Mya Yar Housing, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Ph ; 01-8619347
www.facebook.com/straitsmobilemyanmarPosted6hours, 30 minutes ago
View this post on Facebook သင်တန်းသားများ အဆင်ပြေစေဖို့ ၁၀၀% အာမခံပေးတဲ့
Active English (Interactive English Classes)
English ဘာသာ စကားကို ရင်းနှီးတက်ကြွစွာ အပြန်အလှန်
ဆွေးနွေးအကြံပေးသည့် ပုံစံဖြင့် သင်ကြားပေးနေပါပြီ ...
"English ဘာသာစကား ဟာ သင့်အတွက် အရံအတားမဟုတ်ဘဲ
နင်းတက်သွားရမယ့် လှေကား ဖြစ်စေရပါမယ် ..."
အခြေခံ မကောင်းခဲ့၍ English ဘာသာစကားကို ကြောက်နေသူများ
၂ လ မှ ၆ လ အတွင်း မိမိကိုယ် မိမိ ယုံကြည်စွာ ပြောဆိုရေးသားနိုင်ရန်
“မိမိနှင့်ကိုက်ညီသည့် သင်ကြားပုံ ဟုတ်မဟုတ်
သေချာ လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်သည် ။
သင်ကြားမှူ ပုံစံနဲ့ မိမိရဲ့ တိုးတက်မှူ အပေါ် စိတ်တိုင်းကျ ကျေနပ်မှူ မရှိရင်
တစ်ပတ် အတွင်း သင်တန်းကြေး ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ပြန်အမ်းပေးသွားပါ့မယ် ။
( http://goo.gl/P5yZfp ) <<<
" English ဘာသာစကား လေ့လာနေပေမယ့်
မတိုးတက်ဘူး " ဆိုရင် ဘာလုပ်ရမလဲ ... ?
Active English " Learn Actively & Deeply " သင်တန်း အနေနဲ့
တန်းခွဲသစ်တွေ ဖွင့်ဖို့ရှိပါတယ် ...
( အနီးဆုံး အသစ်ဖွင့်လှစ်မယ့်
တန်းခွဲများ အတွက် အချိန်ဇယားကို
http://goo.gl/TIulrD မှာ ကြည့်လို့ရပါတယ် )
Applied English ကို အဓိက ထားပြီး သင်မှာပါ ...
4 skills လုံး သင်မှာ ဖြစ်ပေမယ့်
Listening နဲ့ Speaking ကို ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ဦးစားပေးသွားမှာပါ ...
( Reading & Writing က အရင်က ကျောင်းတွေမှာလဲ
အတော် လုပ်ခဲ့ပြီးသား ဖြစ်ကြမှာပါ )
ဒီတော့ အဓိက အားနည်းနေတဲ့ အပိုင်းတွေကို အရင် စပြီး ဦးစားပေး သင်ကြားပေးသွားမှာပါ ။
Grammar အဓိက ထားပြီး သွားတဲ့ သင်ကြားမှုပုံစံမျိုး မဟုတ်ဘဲ
လက်တွေ့ အသုံးချ ဘာသာစကား သင်ကြားရေးပုံစံကို အဓိက ထားမှာပါ ။
( ပြောချင်တာက ကျောင်းသင် ပုံစံမဟုတ်ဘဲ
Grammar က အနောက်က လိုက်မှာပါ ။ )
Grammar တအား အားနည်းတဲ့ ကျောင်းသားတွေ အတွက်တော့
လိုအပ်ရင် အချိန်ပို ခေါ်သွားပေးမှာပါ ...
Cambridge သင်ရိုးကို အခြေခံပါတယ် ။
Personal Development , Effective thinking , Successology
စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ သင်တန်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဟန် အတိုင်း
ဖြည့်စွက်ပြီး သင်ကြားပေးသွားမှာပါ ။
သင်မယ့် ဆရာထဲမှာ ကျွန်တော် ( ကိုဇင်ဇေ ) ပါ ပါတယ် ။
တခြား ပြင်ပက သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ ၁၅နှစ် ကျော် ရှိတဲ့ ဆရာတွေ ပါ ပါတယ် ။
( ကျွန်တော် သင်တန်းသားတွေကို ကိုယ်ချင်းစာလို့
ဒီ အစီအစဉ်ကို ထည့်ပေးတာပါ ။
- စာတတ် ၊ စာတော်တိုင်းလည်း စာမသင်တတ်ပါဘူး ။
- စာသင်တတ်တိုင်းလည်း ကိုယ်နဲ့ကိုက်မယ်လို့ သေချာပေါက် မပြောနိုင်ပါဘူး ။
- ဒီတော့ သင်တန်းရဲ့ ဟန်နဲ့ မကိုက်ရင် မြန်မြန် တခြား ကိုယ်နဲ့
ပို အဆင်ပြေတဲ့ ဆရာ ရှာနိုင်ဖို့ ဒီ အစီ အစဉ်ကို ထည့်ပေးထားတာပါ ။
" ပန်းတိုင်တွေ့၍ တွေ့သော ပန်းတိုင် အရောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ "
( Founder & Trainer @ Active English )
( 09 4311 5202 )
<<< သင်တန်း Page မှာ သင်ခန်းစာ အချို့ ကြိုတင် လေ့လာလို့ ရပါတယ် ။
( http://goo.gl/08OFv9 ) <<< English ဘာသာစကားကို ထိတွေ့မှ မပြတ်စေဘဲ အမြဲ လေ့လာလိုသူများ အတွက် Android App ကို ဒီ link ကနေ download ရယူနိုင်ပါတယ် ။
ဆက်သွယ်ရန် : 09 4311 5202
အမှတ် (၁၀) ၊ (၄)လွှာ ၊ဗိုလ်မှူးအောင်လမ်း ၊ ဗိုလ်စိန်မှန် ရပ်ကွက် ၊
ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
< တာမွေအ၀ိုင်းမှတ်တိုင် >
"-စာနဲ့ ဝေးသွားလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်...
-တခြား သင်တန်းတွေ တက်ဖူးပေမယ့် အဆင်မပြေလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်...
-သိပေမယ့် လက်တွေ့ တကယ် အသုံးမချနိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်...
Active English ဟာ သင့်ကို အကောင်းဆုံး အာမခံ ကူညီဖို့ အဆင်သင့်ပါ"
Level 1- Beginner & Elementary Level
Level 2- Pre-intermediate Level
Level 3- Intermediate Level
ဒီ Level ၃ ခု မှာ "English for General Purposes" အနေနဲ့ သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး
နေ့စဉ်သုံး ( Everyday English ) ၊ အထွေထွေ သုံး ( General English ) သာမက
စိတ်ဓာတ် မြှင့်တင်ရေး နဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတိုးတက်စေရေးအတွက်
"Motivation & Personal Development Program for Youth" များနဲ့
အားဖြည့် သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ...
သင်တန်းကြေး - Level တစ်ခု - ၂ လ ၊ ၂ လ ခွဲ ၊ ၃ လ- ၄၀၀၀၀ ကျပ်
***Special Classes ( Tailor-made English Classes & Job Ready Program )
- သင်တန်းသား တစ်ဦးချင်း (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့လိုက် သီးသန့် လိုအပ်ချက်များ အတွက်
Tailor-made English Classes များကို စီစဉ်ပေးထားပါတယ် ...
English စာနဲ့ ဝေးနေပြီးမှ ရုတ်တရက်
-နိုင်ငံခြားသွားဖို့ အချိန် နီးကပ်နေသူတွေ
-အနီးကပ် ကို ယောင်ယမ်းမဟုတ်ပဲ စနစ်တကျ ပြင်ဆင်သွားလိုသူတွေ အတွက်
Job Interviews & Job Ready Program များကိုလည်း
အထိရောက်ဆုံး ဖြစ်အောင် စီစဉ်ပေးထားပါတယ် ...
( http://goo.gl/08OFv9 ) <<< English ဘာသာစကားကို
ထိတွေ့မှု မပြတ်စေဘဲ အမြဲ လေ့လာလိုသူများ အတွက်
Android App ကို ဒီ link ကနေ download ရယူနိုင်ပါတယ် ။
( http://goo.gl/idBc9T ) <<<
Active English သင်တန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
စုပြီး ဖြေပေးထားတာပါ ။
================Posted6hours, 42 minutes ago Exchange Rate (23-Apr-2014)
USD- Buy 957 / Sell 967
SGD- Buy 762 / Sell 770
Euro- Buy 1318 / Sell 1330
Room No.( 14 ), Ground Floor, Shwe Mya Yar Housing, Mya Yar Gone Street, Mingalar Taung Nyunt Tsp
Ph : 01-8619438, 01-8619439
Posted9hours, 48 minutes agoStraits Money ChangerView this post on Facebook Posted 10 hours, 18 minutes ago MEZO ပိန်ဆေးကို အမေရီကန်နိုင်ငံမှာ ထုတ်လုပ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှ တရားဝင်ဖြန့်ဖြူးတာ ဖြစ်ပါတယ်. ကျား.မ မရွေး အသက် ၁၈နှစ်အထက်မှ စတင်ပြီးသောက်သုံးနိုင်ပါသည်..
-- ဂျင်စင်းနှင့် သဘာဝသစ်သီးများမှ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် လူကို ဆိုးကျိုးမဖြစ်စေဘဲ ခန္ဓာကိုယ်မှ အပူအပုပ်. အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ဝမ်းသွားလျှင် အဆီများ ပါသွားပါတယ်. ဝမ်း၁နေ့ကို ပုံမှန် ၁-၂ခါတော့ သွားပါတယ်. ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲ..
၁လကို ၈-၁၅ ပေါင်မှ ကျပါတယ်။
-- ၂ဗူးအထက်ဝယ်ယူသူများ free delivery ပို့ပေးပါတယ်. နယ်မှ မှာယူသူများ ဘဏ်မှ ငွေလွှဲပြီးမှ ပစ္စည်းအော်ဒါလက်ခံပါတယ်.Super Diet!Posted 10 hours, 18 minutes agoMEZO MyanmarView this post on Facebook Exchange Rate (23-Apr-2014)
Posted 10 hours, 22 minutes agoStraits Money ChangerView this post on Facebook ဟန်းဆက်များအား လက်လီ/လက်ကား ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။
Room No.15, GF, Mya Yar Gone Street, Shwe Mya Yar Housing,
Mingalar Taung Nyunt Tsp, Ph ; 01-8619347
Mingalar Taung Nyunt Tsp
Posted 10 hours, 54 minutes agoStraits MobileView this post on Facebook အရမ်းကိုမိုက်တယ်နော်
လိုချင်ရင် မြန်မြန် order ထားကြနော်
Best seller ပါးနီပါ
Magic ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်နဲ့လိုက်မဲ့ အရောင်ကိုပါးပေါ်မှာပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ် :-)
Ph 09449249783♥♥♥ တစ်နေကုန်မပျက်တဲ့ Waterproof Magic Pink ပါးနီ♥♥♥
sis တို့ရေ...... တစ်နေကုန်မပျက်ပဲ ပါးပေါ်မှာသဘာဝအတိုင်း ပန်းသွေးရောင်ခြယ်နေတာမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးလား။ တကယ်တော့ သူ့အရောင်ကပုလဲရောင်လေးပါ။ ပါးပေါ်မှာလိမ်းလိုက်မှ ပန်းရောင်အဖြစ်ပြောင်းပြောင်းလဲသွားတဲ့ lovely magic pink လေးပါ။ ရေစိုံတာမို့ချွေးကြောင့်ပျက်မှာမပူရတော့ဘူးပေါ့။ ၀ယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ 12500 Ks
item name - lovely magic pink ph - 09449249783
Sms / Viber - 09449249783Posted 12 hours, 29 minutes ago
View this post on Facebook US၊S'pore တို့မှ Branded ပစ္စည်းများ
Like လုပ်ထားခြင်းဖြင့် လွယ်ကူစွာ
ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ...US နှင့် Singapore မှလာသည့်ပစ္စည်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။Posted 16 hours, 8 minutes agoSmart Choice FashionView this post on Facebook သင်တန်းသားများ အဆင်ပြေစေဖို့ ၁၀၀% အာမခံပေးတဲ့
================Posted 1 day, 1 hour ago ဒီ Online Shopping လေးမှာတော့
နိုင်ငံတကာမှ Branded ပစ္စည်းများကို
ှUS နှင့် Singapore မှလာသည့်ပစ္စည်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။Posted 1 day, 1 hour agoSmart Choice FashionView this post on Facebook သေး၊လတ် စီးပွါး လုပ်ငန်းများအတွက် SME Myanmar Magazine
မြန်မာနိုင်ငံ မှာရှိနေ ရှိဆဲ ရှိလာလတံ့သော SMEs များ ၊ Entrepreneur များ အတွက်
အကောင်းဆုံး ၊ အကျိုးအရှိဆုံး သတင်းအချက်အလက်တွေ ၊
အတွေးအမြင်တွေ ၊ ဆောင်းပါးတွေ ၊ အင်တာဗျူးတွေ ၊ လမ်းညွှန်တွေ ကို
အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားတင်ပြသွားမယ့် SME Myanmar Magazine ရဲ့ Page တစ်ခုပါ ခင်ဗျာ ။
နာမည်နဲ့ ညီအောင် SMEs ( အသေးစား နှင့် အလတ်စား စီးပွါးလုပ်ငန်းများ ) ဘက်ကို
အဓိက ထားပြီး ဝန်ဆောင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပေမယ့်
အကြီးစား စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းစုများ ၊ ထိပ်တန်း ဝန်ထမ်း အင်အားစုများ ၊ လူငယ် စွန့်ဦးတီထွင်များ ၊
စီးပွါးလုပ်ငန်းတစ်ခု စတင် တည်ထောင်ရန် စိတ်ပါဝင်စားသူများအတွက်ပါ
အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှူ ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားသွားပါ့မယ် ။
https://www.facebook.com/myanmarsmemagazineမြန်မာနိုင်ငံ မှာရှိနေ ရှိဆဲ ရှိလာလတံ့သော SMEs များ ၊ Entrepreneur များ အတွက် Posted 1 day,3hours agoသေး၊လတ် စီးပွါး လုပ်ငန်းများအတွက် SME Myanmar MagazineView this post on Facebook သင်တန်းသားများ အဆင်ပြေစေဖို့ ၁၀၀% အာမခံပေးတဲ့
================( http://goo.gl/08OFv9 ) <<< အမြဲ လေ့လာလိုသူများ အတွက် Android AppPosted 1 day,3hours agoEnglish ဘာသာစကား အရံအတားကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့View this post on Facebook MEZO ပိန်ဆေးကို အမေရီကန်နိုင်ငံမှာ ထုတ်လုပ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှ တရားဝင်ဖြန့်ဖြူးတာ ဖြစ်ပါတယ်. ကျား.မ မရွေး အသက် ၁၈နှစ်အထက်မှ စတင်ပြီးသောက်သုံးနိုင်ပါသည်..
-- ၂ဗူးအထက်ဝယ်ယူသူများ free delivery ပို့ပေးပါတယ်. နယ်မှ မှာယူသူများ ဘဏ်မှ ငွေလွှဲပြီးမှ ပစ္စည်းအော်ဒါလက်ခံပါတယ်.
Super Diet!Posted 1 day,5hours agoMEZO MyanmarView this post on Facebook 09449249783ကျမတို့ မိန်းကလေးတွေဟာ အသက်၂၀ကျော်လာတာနှင့်အမျှ မျက်နှာမှာ အဆီတွေစုလာတတ်ကြပါတယ်။ မေးစေ့နှစ်ထပ်ဖြစ်နေတာတွေ၊ ပါးတွေတွဲကျလာတာတွေဟာ မျက်နှာပြင်ရှိ မေးရိုးတစ်လျှောက် အဆီတွေစုလာတာကြောင့်ပါ။ ဒါတွေက လူကို အိုမင်းရင့်ရော်စေပီး အသက်ကြီးတဲ့ပုံပေါက်စေပါတယ်။ ဒီအတွက်ဘာမှပူမနေပါနဲ့တော့။ မေးစေ့ချွန်ချွန်လေးနဲ့ မျက်နှာလေးသွယ်ပီး Barbie အရုပ်မလေးလို လှပပီး အရွယ်တင်နုပျိုစေဖို့ V-line shape လေးက ကူညီပေးမှာပါ။ V-line ဆိုတာက မျက်နှာ အဆီကျအောင် မေးရိုးမှာကပ်ရတဲ့ အဆီချကပ်ခွာလေးပါ။ သူက မျက်နှာမှာ အဆီများပီး မေးနှစ်ထပ်ဖြစ်နေတာတွေ၊ ပါးအဆီများပီး မျက်နှာလေးထောင့်ဖြစ်နေတာတွေကို မျက်နှာလေးသွယ်ပီးနုသွားအောင်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ ခွဲစိတ်စရာမလို၊ အချိန်ကုန်ခံ အပြင်သွားပီး treatment လုပ်စရာလည်းမလိုဘဲ အိမ်မှာနေရင်း အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ပဲ လှပသွားစေမှာပါ။ အချိန်သီးသန့်ကြီးပေးစရာမလိုပဲ မျက်နှာမှ ၁နေ့ကို ၁နာရီကပ်ပီး ပတ်ထားရုံနှင့် ၁ပတ်အတွင်းသိသာလာမှာပါရှင်။ ထို့ကြောင့် အလုပ်များပီး အချိန်မပေးနိုင်သူတွေအတွက် အဆင်လည်းပြေစေမှာမို့ ၀ယ်ပီး စမ်းသုံးပီး result ကိုကြည့်လိုက်ကြပါရှင်။ ၁ပတ်ပြည့်လျှင်သိသာပီး ၂ပတ်ပြည့်လျှင်လုံလောက်ပါဘီ။ ၁ပတ်ဆိုသိသားပြီး ၂ပတ်ဆိုလုံလောက်ပါဘီရှင်။
၂ပတ်ပီးတာနဲ့ ငါတော့လှသွားပြီဆိုပီး အနေအထိုင် အစားအသောက် မဆင်ခြင်ပဲမနေမိစေဖို့သတိထားကြနော် V-line သုံးသော sis တို့ရဲ့ပုံကို Page မှာတင်ပေးမှာမို့ပုံပို့ဖို့မမေ့ကြနဲ့နော်။ 1box ---40000 Ks
Sms/viber --- 09449249783
Wholesale ပေးပါတယ်ရှင်။ 1box တွင်ကပ်ခွာ ၇ ခုနှင့် belt ၁ခုပါပါတယ်ရှင်။
V-line ကပ်ခွာလေးကို မေးရိုးတစ်လျှောက်ကပ်ပါ။ အသင့်ပါလာသော Belt ဖြင့် မျက်နှာကို ၁နာရီပတ်ထားပါ။ ပီးလျှင် မျက်နှာပြန်သစ်စရာမလိုပါ။ ၁နေ့ကို ၁နာရီသုံးရုံဖြင့်လုံလောက်ပါသည်။ အချိန်ပိုပတ်ရန်မလိုပါ။ အထူးသတိပြုရမည့်အချက်မှာ ကောင်းဘီ၊ လူသုံးများဘီဆို အတုတွေ ပေါ်လာကြပါတယ်။ အတုတွင် ပါသော Belt မှာ သုံးပီးသားတွေဖြစ်သောကြောင့် မျက်နှာထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ လူတိုင်းကိုလှစေချင်သောစိတ်လေးဖြင့် Like & Share လုပ်ပီး ကူညီကြပါဦးနော် :)
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်Posted 1 day,6hours ago
View this post on Facebook Ph 09449249783♥♥♥ တစ်နေကုန်မပျက်တဲ့ Waterproof Magic Pink ပါးနီ♥♥♥
Sms / Viber - 09449249783Posted 1 day,6hours ago
================Posted 1 day,6hours ago US၊S'poreတို့မှ ပစ္စည်းများကိုဈေးနှုန်း
တယ်....US နှင့် Singapore မှလာသည့်ပစ္စည်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။Posted 1 day,7hours agoSmart Choice FashionView this post on Facebook MEZO ပိန်ဆေးကို အမေရီကန်နိုင်ငံမှာ ထုတ်လုပ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှ တရားဝင်ဖြန့်ဖြူးတာ ဖြစ်ပါတယ်. ကျား.မ မရွေး အသက် ၁၈နှစ်အထက်မှ စတင်ပြီးသောက်သုံးနိုင်ပါသည်..
-- ၂ဗူးအထက်ဝယ်ယူသူများ free delivery ပို့ပေးပါတယ်. နယ်မှ မှာယူသူများ ဘဏ်မှ ငွေလွှဲပြီးမှ ပစ္စည်းအော်ဒါလက်ခံပါတယ်.Super Diet!Posted 1 day, 10 hours agoMEZO MyanmarView this post on Facebook US၊S'pore တို့မှ ပစ္စည်းများကို ဈေးနှုန်း
Like လုပ်ထားခြင်းဖြင့် လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူ
နိုင်ပါသည်။US နှင့် Singapore မှလာသည့်ပစ္စည်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။Posted 1 day, 12 hours agoSmart Choice FashionView this post on Facebook " English ဘာသာစကား လေ့လာနေပေမယ့်
မတိုးတက်ဘူး " ဆိုရင် ဘာလုပ်ရမလဲ ... ?   < ကိုဇင်ဇေ >
ကျွန်တော့်ကို မေးကြတဲ့ သင်တန်းသားတွေ ၊
မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ အတော်များလို့ပါ ။
အခုတော့ အတိုချုံးပြီး ပြောပေးပါ့မယ် ။
နောက်ကျရင်တော့ အသေးစိတ် ထပ် ဆွေးနွေးပေးပါ့မယ်ဗျာ ။
English ဘာသာစကား လေ့လာနေပေမယ့်
မတိုးတက်ဘူးဆိုတဲ့ လူအများစုမှာ ဖြစ်တတ်တာက
ကြုံရာ ကျဘမ်း ၊ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် လေ့လာနေမိတတ်တာပါ ။
ကြုံတဲ့ စာအုပ် ၊ ဆောင်းပါး ဖတ်တယ်
ဒီလို ကြုံရာ လုပ်တာက
Intermediate အဆင့်လောက် ရောက်ပြီးတဲ့ လေ့လာသူတွေ အတွက်ဆို
သိပ် ပြသနာ မရှိပါ ။
အဲ အဆင့်လောက် မရောက်သေးပဲ
( ကိုယ့်ကို ကိုယ် ဘယ်အဆင့် ရောက်လို့ ရောက်နေမှန်း တောင် မသိသေးပဲ )
အဲလို ကြုံရာ လေ့လာ မိရင် တိုးတက်မှုနှုန်း နှေးတတ်ပါတယ် ။
ဒီတော့ ကိုယ့်မှာ အဲလို ပြသနာ ကြုံနေရင်
စနစ်ကျတဲ့ ပုံစံ ၊ သင်ရိုး တစ်ခု ထားပြီး လေ့လာပေးပါ ။
သင်ရိုး တစ်ခုကို စွဲပြီး လေ့လာပေးပါ ။
( Cambridge, Oxford , Longman , MacMillan တို့ရဲ့
Course/ Publication တစ်ခုခု ကို သာ ကိုင်လိုက်ပါ ။ )
ကိုယ့် တိုးတက်နှုန်းကို ကိုယ်ပြန်ပြီး သိစေမယ့်
Diary/record လို ဟာမျိုးထားပါ ။
အဲလို Diary မလုပ်နိုင်ရင်တောင်
သင်ရိုးကို ကိုယ့်ရဲ့ Checklist လိုသဘောထားပြီး
ပုံမှန် ကျေညက်အောင် လေ့လာသွားပါ ။
သူများတွေ ပြောနိုင် ၊ ရေးနိုင် နေတာတွေကို အားကျပြီး
ကိုယ့် လေ့လာလက်စကိုချ ၊
သူတို့ လုပ်နေတာတွေ လိုက်လုပ်မိတတ်တာမျိုးကို
ရပ်တန်းက ရပ်ပါ ။
ဗန်းစကားတွေ ၊ တောက်တိုမယ်ရ စကားတွေကို
ဘုမသိ ဘမသိ လိုက်လုပ်နေရင်း
ကိုယ် လေ့လာနေတဲ့ လမ်းကြောင်းကနေ
အခုနက ကျွန်တော် ပြောခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေထဲက
တစ်ခုခုရဲ့ သင်ရိုးကိုသာ ပုံမှန်လုပ်သွားပါ ။
တဖြည်းဖြည်း အဲဒါတွေလည်း ပါ လာ မှာပါ ။
( Intermediate အဆင့် မရောက်သေးတဲ့ လူတွေ အတွက် ပြောတာနော် )
ဘာသာစကား ဆိုတာ ရေရှည်လုပ်တဲ့ လူက သာပြီးသားပါ ။
ကိုယ်က သူတို့ကို မမှီသေးဘူး ဆိုပြီး ဘယ်တော့မှ မသိမ်ငယ်ပါနဲ့ ။
အဓိက ကိုယ့် နှုန်းနဲ့ ကို မှန်မှန်လေး သွားနိုင်ဖို့ပါ ။
" လေ့လာမိပြီးသမျှကို သိရုံသက်သက် မဟုတ်ပဲ
အသုံးချနိုင်အောင် ကြိုးစားနေဖို့ပါ "
English ဘာသာစကားသင်တာ ကြွားဖို့မဟုတ်ပါဘူး ။
ထပ်ပြောရရင် " အကျိုးရှိအောင် အသုံးချ ဖို့ပါ "
ဒီတော့ ယောင်ဝါးဝါးတွေ မလုပ်မိပါစေနဲ့ ။
တစ်ခုခု ကို အပိုင် ကိုင်စွဲလေ့လာပါ ။
ဒီလိုမျိုး တကယ် လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်
၆ လ ၊ ၁ နှစ် လောက်နဲ့တောင်
သိသိသာ သာ တိုးတက်လာနိုင်ပါတယ် ။
တစ်နေ့ကို ၁/ ၂ နာရီလောက်ပဲ သေသေချာချာ လုပ်ရင်တောင်
နောက်တစ်ခုက အရေးအကြီးဆုံးက စိတ်အားတက်ကြွမှူပါ ။
ဘာပဲ လုပ်လုပ် အဲဒါက အရေးကြီးပါတယ် ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိထားပြီး ....
လေ့လာရာမှာ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို သုံးပါ ။
စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေမယ့် သင်ရိုးတွေကို လေ့လာပါ ။
စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေမယ့် ဆရာသမားတွေ ဆီမှာ သင်ယူပါ ။
စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေမယ့် လေ့ကျင့်ဖော်တွေနဲ့ လေ့ကျင့်ပါ ။
ဒါဆို ကိုယ်က မတိုးတက်ချင်ပါဘူး ။
အပျော် လုပ်တာပါ ဆိုရင်တောင် မနေပါဘူးဗျာ ။
မုချ မလွဲ တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ် ။
ကျန်တာတွေတော့ နောင်မှ ဆက်ပြောပေးပါ့မယ်ဗျာ ။
ကိုယ့်မှာလည်း ဒီလို ပြသနာ ရှိနေတယ်ဆိုရင်
ဖတ်ပြီး မေ့မပစ်လိုက်ပဲ .....
.....အခုပဲ စလုပ် ကြည့်ကြပါစို့ဗျာ ။
English ဘာသာစကား အရံအတားကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ <<< Online ပေါ်မှ ဆက်လက် လေ့လာရန်
Active Learning Society <<< ( 09 4311 5202 ) သင်တန်းကိစ္စ စုံစမ်းရန်
( http://goo.gl/TIulrD ) <<<
သင်တန်း ကြော်ငြာ အပြည့်အစုံ နှင့်
နောက်ဆုံးလက်ကျန် ဖွင့်လှစ်မည့် တန်းခွဲသစ် အချိန်ဇယား
( http://goo.gl/1EZisY ) <<<
သဒ္ဒါဟာ သင်ကြားမှူ သင်ယူမှူ ဖြစ်စဉ်မှာ အရေးအကြီးဆုံးလား ?
"ငွေကြေးကြောင့် သင့် ပညာရေး ...လုံးဝ ...လုံးဝ... မဝေးစေရပါ..."
===============Posted2days ago Active English (Interactive English Classes)
၄ ၊ ၅ လပိုင်းမှာ အနီးဆုံး အသစ်ဖွင့်လှစ်မယ့်
တန်းခွဲများ အတွက် အချိန်ဇယား တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ ...
< ၀၉ ၄၃၁၁ ၅၂၀၂ > ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ် ...
( အချိန်ဇယား နဲ့ တခြား လိုအပ်တာတွေကို ပုံမှာ ကြည့်လို့ရပါတယ် )
================Posted2days ago
View this post on Facebook Posted2days ago US၊S'pore တို့မှပစ္စည်းများကို ဈေးနှုန်း
Branded နာရီလှလှလေးတွေ လည်း
Like လုပ်ထားခြင်းဖြင့် လွယ်ကူစွာ ဝယ်
ယူနိုင်ပါပြီ......US နှင့် Singapore မှလာသည့်ပစ္စည်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။Posted2days,4hours agoSmart Choice FashionView this post on Facebook မော်ဒန် အိမ်ရှင်မများ အတွက် လိုအပ်မဲ့ ဗဟုသုတ အဖြာဖြာကို တင်ပေးနေတဲ့ page လေးပါ။ အိမ်ရှင်မတွေအတွက် အသုံးဝင်ခဲ့ရင် like & share လုပ်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
#https://www.facebook.com/thehugochannelမော်ဒန် အိမ်ရှင်မများအတွက် The Hugo ChannelPosted3days agoThe Hugo ChannelView this post on Facebook မော်ဒန် အိမ်ရှင်မများ အတွက် လိုအပ်မဲ့ ဗဟုသုတ အဖြာဖြာကို တင်ပေးနေတဲ့ page လေးပါ။ အိမ်ရှင်မတွေအတွက် အသုံးဝင်ခဲ့ရင် like & share လုပ်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
#https://www.facebook.com/thehugochannelမော်ဒန် အိမ်ရှင်မများအတွက် The Hugo ChannelPosted3days,2hours agoThe Hugo ChannelView this post on Facebook US၊S'pore တို့မှပစ္စည်းများကို ဈေးနှုန်း
အမျိုးသား/သမီးဝတ် Branded နာရီလှ
Likeလုပ်ထားခြင်းဖြင့် လွယ်ကူစွာ ဝယ်
ယူနိုင်ပါပြီ....US နှင့် Singapore မှလာသည့်ပစ္စည်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။Posted3days,3hours agoSmart Choice FashionView this post on Facebook ****** Special Instock Gadget ******
မည်သည့်ဖုန်းနှင့်မဆိုတွဲဖက်အသုံးပြုနိုပ်ပြီဲးPhone ဖြင့်ဓာတ်ပုံရိုက်
တတ်သူများအကြိုက်တွေ့စေမယ့်3in 1 Universal Lens လေးတွေပါ။
Wide Angel ရိုက်ကူးရန် Wide Angle Lens ၊
အနီးကပ်ပုံ၇ိပ်များကိုထင်ရှားပြတ်သားစွာရိုက်ကူးနိုင်ရန် Macro Lens ၊
180 ဒီဂရီအတွင်း ပုံရိပ်များကိုအဆင်ပြေစွာဖမ်းယူနိုင်ရန် Fish Eye Lens
ဈေးနှုန်းကတော့ ၁၀၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပြီးဝယ်ယူလိုပါက
09254020846,09250130854 ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။Posted3days,3hours ago
View this post on Facebook Posted3days,4hours ago Branded ပစ္စည်းကောင်းများကို ပြည်ပမှ တိုက်ရိုက်မှာယူနိုင်မည့် Gogerous and the Grace Online Shopping ဖြစ်ပါသည်။ Like လုပ်ထားခြင်းဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။We provide fashion clothing, high quality cosmetics, branded luxury handbags and guarantee all of our listed products are 100% genius European and USA madePosted3days,4hours agoGorgeous and the GraceView this post on Facebook ဈေးနူန်းလေးတွေသိချင်ရင်တော့Smart Choice Fashion msg box မှ မေးမြန်းစုံးစမ်းနိုင်ပါတယ်နော်......
https://www.facebook.com/smartchoice62?ref=hlPosted3days,4hours ago
View this post on Facebook ဖုန်းနဲ. အီလက်ထောနစ် ပစ္စည်းမျိူးစုံ , အ၀တ်အစားမျိုးစုံ နှင့် ခန်းဝင် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ပတ်သက်တဲ့ update လေးတွေတင်ပေးယုံသာမက ဗဟုသုတများကိုလဲ တင်ပေးနေ့တဲ့page လေးနော် ... ကဲ like ထားကြရအောင်
https://www.facebook.com/ShweAyarShwe Ayar motto - always effort to satisfy customer.Posted3days,5hours agoShwe Ayar shopping centreView this post on Facebook မော်ဒန် အိမ်ရှင်မများ အတွက် လိုအပ်မဲ့ ဗဟုသုတ အဖြာဖြာကို တင်ပေးနေတဲ့ page လေးပါ။ အိမ်ရှင်မတွေအတွက် အသုံးဝင်ခဲ့ရင် like & share လုပ်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
#https://www.facebook.com/thehugochannelမော်ဒန် အိမ်ရှင်မများအတွက် The Hugo ChannelPosted3days,5hours agoThe Hugo ChannelView this post on Facebook US၊S'pore တို့မှ ပစ္စည်းများကိုဈေးနှုန်း
တယ်...US နှင့် Singapore မှလာသည့်ပစ္စည်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။Posted3days,9hours agoSmart Choice FashionView this post on Facebook မော်ဒန် အိမ်ရှင်မများ အတွက် လိုအပ်မဲ့ ဗဟုသုတ အဖြာဖြာကို တင်ပေးနေတဲ့ page လေးပါ။ အိမ်ရှင်မတွေအတွက် အသုံးဝင်ခဲ့ရင် like & share လုပ်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
#https://www.facebook.com/thehugochannelမော်ဒန် အိမ်ရှင်မများအတွက် The Hugo ChannelPosted3days, 11 hours agoThe Hugo ChannelView this post on Facebook 28.4.2014 ပစ္စည်း ရောက်ပါမယ်ရှင် လိုချင်ရင်ကြိုမှာထားလို့ရပါဘီ ပိုက်ဆံ ကြိုပေးစရာမလိုပဲ နာမည်နှင့် လိုချင်သော အတုံး အရေအတွက် ကိုပြောထားရုံလေးပါပဲရှင်
Ph/viber 094492497835 ရက်ပြည့်တာနဲ့ သိသိသာသာဖြူဖွေးလာပီး အမာရွတ်တွေပါးလာမှပါ။ ရေရှည်စွဲသုံးလျှင် အမာရွတ်ပျောက်ပီး korea လေးတွေလိုဖြူစင်ချောမွတ်သော အသားအရေပိုင်ရှင်လေးဖြစ်သွားမှာ အသေအချာပါပဲရှင်။ သင်္ကြန်မှာ အသားမည်းမှာကြောက်သူတွေကတော့ဒီကိုယ်တိုက်ဆပ်ပြာလေးဆောင်ထားလိုက်ပေါ့ ( ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းမရှိတာမို့ကိုယ်တိုင်ဝယ်သုံးပီး result ကိုစောင့်ကြည့်စေချင်ပါတယ်ရှင် ကြော်ငြာနေစရာ မလိုလောက်အောင်ကောင်းတာ လက်တွေ့သိစေချင်လို့ပါ။ ၁. အသားကို ဖြူဝင်းလှပစိုပြေ စေပါတယ်ရှင်။
၂. ပေါင်ကြား၊ ချိုင်းကြား မည်းနေတာတွေ ဖြူဖွေးစေပါတယ်။
၃. Nipple လေးတွေပန်းရောင်သန်းလာမှာပါ :P
၄. အမာရွတ်၊ ဂျွတ်ပျောက်ပါတယ်။
၅. ခန္တာကိုယ်မှာ ၀က်ခြံပေါက်ခြင်းနှင့် ၀က်ခြံကြောင့်ဖြစ်သော အမာရွတ်များကိုလည်းပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
၆. ကလေးနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များလည်း ဆပ်ပြာကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ၇. ဆပ်ပြာ၁တုံးကို အနည်းဆုံး ၁လ အများဆုံး၂လ ခံပါတယ်ရှင်။
!!!!! For Body Use Only!!!!!!
အသုံးပြုပုံ ၁. ခန္တာကိုယ်ကိုရေလောင်းပါ။
၂. ပီးလျှင်ပုံမှန်ဆပ်ပြာတိုက်သလို ခန္တာကိုယ်အနှံတိုက်ပါ။ ၃. အသားအရေခြောက်သူဆိုလျှင် ခန္တာကိုယ်မှာဆပ်ပြာကိုတိုက်ပီး 3မိနစ်ထားပါ။ ၄. အသားအရေအဆီပြန်ပီး ကျောမှာဝက်ခြံပေါက်သူတွေက ၅မိနစ်ထားပါ။ ၅. မိနစ်ပြည့်ဘီဆိုလျှင်ရေမဆေးချသေးဘဲ လက်နဲ့လိုက်ပွတ်ထုတ်လိုက်ပါ။ ၆. ပီးလျှင်ပုံမှန်အတိုင်းရေလောင်းချိုးလိုက်ပါ။ ***** To Know Best Result *****
ဆပ်ပြာသုံးတဲ့နေ့ကစပီး ၅ရက်မြောက်နေ့အထိ ဘာ lotion မှမလိမ်းဘဲ အသားအရေပြောင်းလဲလာတာကိုစောင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ ( ၆ ရက်မြောက်နေ့မှစပီး Lotion ပြန်လိမ်းနိုင်ပါဘီရှင်။ **** ဆပ်ပြာဝယ်သုံးသော ချစ် customer ကြီးရဲ့ပုံကို page မှာတင်ပေးမှာမို့ ဆပ်ပြာနဲ့တွဲရိုက်ပီးပုံလေးတွေပေးပို့ပေးကြဖို့မမေ့နဲ့နော်။ #### အတုတွေပေါ်နေတာမို့သတိထားစေချင်ပါတယ်။ အတုကိုသုံးမိပီး အသားအရေပျက်စီးမှာစိုးလို့ပါရှင်။
လူတိုင်းကိုလှပစေချင်သောစိတ်လေးဖြင့် like လေးနှိပ်ပီး ကူညီကြပါဦးနော်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။Posted3days, 11 hours ago
View this post on Facebook ပါးနီဆိုတာမိန်းကလေးတွေတွက်မရှိမုဖစ်ပါနော်
လိုချင်ရင် ph 09449249783♥♥♥ တစ်နေကုန်မပျက်တဲ့ Waterproof Magic Pink ပါးနီ♥♥♥
Sms / Viber - 09449249783Posted3days, 11 hours ago
View this post on Facebook သိသိသာသာပြောင်းလဲချင်ပါသလား :-)
Ph 09449249783၀က်ခြံနှင့် ၀က်ခြံကြောင့်ဖြစ်သောအမာရွတ်၊ တင်းတတ်၊ မှဲ့ခြောက် များက်ိုသိသာစွာလျော့ပါးပျောက်ကင်းစေသည့်အပြင် ဆားဝက်ခြံများ၊ အသားမညီခြင်းများနှင့် ချွေးပေါက်ကျယ်နေသူများကိုလည်း ပုံမှန်ချွေးပေါက်အဖြစ်ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပြီး မျက်နှာကို Baby face လေးလိုနူးညံ့ချောမွေ့ဖြူဖွေးသွားစေမှာပါ။
အသုံးပြုပုံ။ ။ မျက်နှာမှာအမြုပ်လေးတွေထအောင်လုပ်ပီးညင်သာစွာသစ်ရုံပါပဲရှင် :)
Delivery charges ။ ။
(ရန်ကုန်မြို့တွင်း) - 2000 Ks
(နယ်ကားဂိတ်အရောက် တန်ဆာခပါပီး) - 3500 KsPosted3days, 11 hours ago
View this post on Facebook မည်သည့်ကဏ္ဍအတွက်မဆို facebook users တွေ သိချင်သမျှကို message box ကနေ လှမ်းမေးလိုက်ပါ။ OHD ကနေ အတတ်နိုင်ဆုံး အဖြေရှာပြီး post တင်ပေးသွားပါ့မယ်။ သိချင်တာတွေ မေးနိုင်ဖို့ OHD ကို Like ထားစို့။
https://www.facebook.com/OHD.onlinehelpdeskသိချင်တာတွေ မေးနိုင်ဖို့ OHD ကို Like ထားစို့။ We will try our best to support you!Posted3days, 22 hours agoOnline Help DeskView this post on Facebook မည်သည့်ကဏ္ဍအတွက်မဆို facebook users တွေ သိချင်သမျှကို message box ကနေ လှမ်းမေးလိုက်ပါ။ OHD ကနေ အတတ်နိုင်ဆုံး အဖြေရှာပြီး post တင်ပေးသွားပါ့မယ်။ သိချင်တာတွေ မေးနိုင်ဖို့ OHD ကို Like ထားစို့။
https://www.facebook.com/OHD.onlinehelpdeskသိချင်တာတွေ မေးနိုင်ဖို့ OHD ကို Like ထားစို့။ We will try our best to support you!Posted3days, 22 hours agoOnline Help DeskView this post on Facebook Ph 09449249783ကျမတို့ မိန်းကလေးတွေဟာ အသက်၂၀ကျော်လာတာနှင့်အမျှ မျက်နှာမှာ အဆီတွေစုလာတတ်ကြပါတယ်။ မေးစေ့နှစ်ထပ်ဖြစ်နေတာတွေ၊ ပါးတွေတွဲကျလာတာတွေဟာ မျက်နှာပြင်ရှိ မေးရိုးတစ်လျှောက် အဆီတွေစုလာတာကြောင့်ပါ။ ဒါတွေက လူကို အိုမင်းရင့်ရော်စေပီး အသက်ကြီးတဲ့ပုံပေါက်စေပါတယ်။ ဒီအတွက်ဘာမှပူမနေပါနဲ့တော့။ မေးစေ့ချွန်ချွန်လေးနဲ့ မျက်နှာလေးသွယ်ပီး Barbie အရုပ်မလေးလို လှပပီး အရွယ်တင်နုပျိုစေဖို့ V-line shape လေးက ကူညီပေးမှာပါ။ V-line ဆိုတာက မျက်နှာ အဆီကျအောင် မေးရိုးမှာကပ်ရတဲ့ အဆီချကပ်ခွာလေးပါ။ သူက မျက်နှာမှာ အဆီများပီး မေးနှစ်ထပ်ဖြစ်နေတာတွေ၊ ပါးအဆီများပီး မျက်နှာလေးထောင့်ဖြစ်နေတာတွေကို မျက်နှာလေးသွယ်ပီးနုသွားအောင်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ ခွဲစိတ်စရာမလို၊ အချိန်ကုန်ခံ အပြင်သွားပီး treatment လုပ်စရာလည်းမလိုဘဲ အိမ်မှာနေရင်း အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ပဲ လှပသွားစေမှာပါ။ အချိန်သီးသန့်ကြီးပေးစရာမလိုပဲ မျက်နှာမှ ၁နေ့ကို ၁နာရီကပ်ပီး ပတ်ထားရုံနှင့် ၁ပတ်အတွင်းသိသာလာမှာပါရှင်။ ထို့ကြောင့် အလုပ်များပီး အချိန်မပေးနိုင်သူတွေအတွက် အဆင်လည်းပြေစေမှာမို့ ၀ယ်ပီး စမ်းသုံးပီး result ကိုကြည့်လိုက်ကြပါရှင်။ ၁ပတ်ပြည့်လျှင်သိသာပီး ၂ပတ်ပြည့်လျှင်လုံလောက်ပါဘီ။ ၁ပတ်ဆိုသိသားပြီး ၂ပတ်ဆိုလုံလောက်ပါဘီရှင်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်Posted3days, 23 hours ago
Sms / Viber - 09449249783Posted3days, 23 hours ago
View this post on Facebook Ph 09449249783၀က်ခြံနှင့် ၀က်ခြံကြောင့်ဖြစ်သောအမာရွတ်၊ တင်းတတ်၊ မှဲ့ခြောက် များက်ိုသိသာစွာလျော့ပါးပျောက်ကင်းစေသည့်အပြင် ဆားဝက်ခြံများ၊ အသားမညီခြင်းများနှင့် ချွေးပေါက်ကျယ်နေသူများကိုလည်း ပုံမှန်ချွေးပေါက်အဖြစ်ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပြီး မျက်နှာကို Baby face လေးလိုနူးညံ့ချောမွေ့ဖြူဖွေးသွားစေမှာပါ။
(နယ်ကားဂိတ်အရောက် တန်ဆာခပါပီး) - 3500 KsPosted3days, 23 hours ago
View this post on Facebook Ph 094492497835 ရက်ပြည့်တာနဲ့ သိသိသာသာဖြူဖွေးလာပီး အမာရွတ်တွေပါးလာမှပါ။ ရေရှည်စွဲသုံးလျှင် အမာရွတ်ပျောက်ပီး korea လေးတွေလိုဖြူစင်ချောမွတ်သော အသားအရေပိုင်ရှင်လေးဖြစ်သွားမှာ အသေအချာပါပဲရှင်။ သင်္ကြန်မှာ အသားမည်းမှာကြောက်သူတွေကတော့ဒီကိုယ်တိုက်ဆပ်ပြာလေးဆောင်ထားလိုက်ပေါ့ ( ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းမရှိတာမို့ကိုယ်တိုင်ဝယ်သုံးပီး result ကိုစောင့်ကြည့်စေချင်ပါတယ်ရှင် ကြော်ငြာနေစရာ မလိုလောက်အောင်ကောင်းတာ လက်တွေ့သိစေချင်လို့ပါ။ ၁. အသားကို ဖြူဝင်းလှပစိုပြေ စေပါတယ်ရှင်။
လူတိုင်းကိုလှပစေချင်သောစိတ်လေးဖြင့် like လေးနှိပ်ပီး ကူညီကြပါဦးနော်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။Posted3days, 23 hours ago
https://www.facebook.com/OHD.onlinehelpdeskသိချင်တာတွေ မေးနိုင်ဖို့ OHD ကို Like ထားစို့။ We will try our best to support you!Posted4days agoOnline Help DeskView this post on Facebook US၊S'pore စသည့်နိုင်ငံများမှ ပစ္စည်း
များကို ဈေးနှုန်းမှန်ကန်စွာ မှာယူနိုင်ပါပြီ
Branded နာရီလှလှလေးတွေ လည်းရ
တယ်....US နှင့် Singapore မှလာသည့်ပစ္စည်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။Posted4days agoSmart Choice FashionView this post on Facebook Gadget ပစ္စည်းးမျိုးစုံတို့ကိုလက်လီလက်ကားရောင်းချပေးနေတဲ့ Online Store တခုပါ။
Like ထားကြပါအုန်းနော်။Absolutely For You !!! Posted4days, 1 hour agoMyanmar Online Gadget StoreView this post on Facebook မည်သည့်ကဏ္ဍအတွက်မဆို facebook users တွေ သိချင်သမျှကို message box ကနေ လှမ်းမေးလိုက်ပါ။ OHD ကနေ အတတ်နိုင်ဆုံး အဖြေရှာပြီး post တင်ပေးသွားပါ့မယ်။ သိချင်တာတွေ မေးနိုင်ဖို့ OHD ကို Like ထားစို့။
https://www.facebook.com/OHD.onlinehelpdeskသိချင်တာတွေ မေးနိုင်ဖို့ OHD ကို Like ထားစို့။ We will try our best to support you!Posted4days,2hours agoOnline Help DeskView this post on Facebook US၊S'poreတို့မှ Branded ပစ္စည်းများကို
နာရ်ီလှလှလေးတွေလည်းရနေပြီနော်...US နှင့် Singapore မှလာသည့်ပစ္စည်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။Posted4days,6hours agoSmart Choice FashionView this post on Facebook Gadget ပစ္စည်းးမျိုးစုံတို့ကိုလက်လီလက်ကားရောင်းချပေးနေတဲ့ Online Store တခုပါ။
Like ထားကြပါအုန်းနော်။Absolutely For You !!! Posted4days,6hours agoMyanmar Online Gadget StoreView this post on Facebook High Quality Replica bags များကို ဈေးနှုန်းသက်သာ ပစ္စည်းမှန်ကန်စွာဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီBest quality with reasonable price...Posted4days, 10 hours agoAngel Online ShopView this post on Facebook US၊S'poreနှင့် နိုင်ငံတကာမှBranded
ပစ္စည်းများကို ဈေးနှုန်းမှန်ကန်စွာ မှာယူ
တယ်ရှင်....US နှင့် Singapore မှလာသည့်ပစ္စည်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။Posted4days, 14 hours agoSmart Choice FashionView this post on Facebook Discount Sale တွေကို စိတ်ဝင်စားကြသူများအတွက် ပစ္စည်းကောင်း အစုံအလင်ကို ဈေးနှုန်းချိူသာစွာ ဝယ်နိုင်ဖို့ promotion & event သီးသန့်စုထားတဲ့ page လေးပါ။ promotion သတင်းအစုံအလင်ကို အရင်ဆုံးသိရအောင် like ထားကြပါဦးလို့။
https://www.facebook.com/MyanmarBigDealsEnjoy promotions, deals,events and latest discount in Myanmar. http://mm-deal.comPosted5days agoMyanmar Big DealsView this post on Facebook Ph 09449249783၀က်ခြံနှင့် ၀က်ခြံကြောင့်ဖြစ်သောအမာရွတ်၊ တင်းတတ်၊ မှဲ့ခြောက် များက်ိုသိသာစွာလျော့ပါးပျောက်ကင်းစေသည့်အပြင် ဆားဝက်ခြံများ၊ အသားမညီခြင်းများနှင့် ချွေးပေါက်ကျယ်နေသူများကိုလည်း ပုံမှန်ချွေးပေါက်အဖြစ်ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပြီး မျက်နှာကို Baby face လေးလိုနူးညံ့ချောမွေ့ဖြူဖွေးသွားစေမှာပါ။
(နယ်ကားဂိတ်အရောက် တန်ဆာခပါပီး) - 3500 KsPosted5days, 1 hour ago
လူတိုင်းကိုလှပစေချင်သောစိတ်လေးဖြင့် like လေးနှိပ်ပီး ကူညီကြပါဦးနော်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။Posted5days, 1 hour ago
Sms / Viber - 09449249783Posted5days, 1 hour ago
View this post on Facebook Ph 09449249783ကျမတို့ မိန်းကလေးတွေဟာ အသက်၂၀ကျော်လာတာနှင့်အမျှ မျက်နှာမှာ အဆီတွေစုလာတတ်ကြပါတယ်။ မေးစေ့နှစ်ထပ်ဖြစ်နေတာတွေ၊ ပါးတွေတွဲကျလာတာတွေဟာ မျက်နှာပြင်ရှိ မေးရိုးတစ်လျှောက် အဆီတွေစုလာတာကြောင့်ပါ။ ဒါတွေက လူကို အိုမင်းရင့်ရော်စေပီး အသက်ကြီးတဲ့ပုံပေါက်စေပါတယ်။ ဒီအတွက်ဘာမှပူမနေပါနဲ့တော့။ မေးစေ့ချွန်ချွန်လေးနဲ့ မျက်နှာလေးသွယ်ပီး Barbie အရုပ်မလေးလို လှပပီး အရွယ်တင်နုပျိုစေဖို့ V-line shape လေးက ကူညီပေးမှာပါ။ V-line ဆိုတာက မျက်နှာ အဆီကျအောင် မေးရိုးမှာကပ်ရတဲ့ အဆီချကပ်ခွာလေးပါ။ သူက မျက်နှာမှာ အဆီများပီး မေးနှစ်ထပ်ဖြစ်နေတာတွေ၊ ပါးအဆီများပီး မျက်နှာလေးထောင့်ဖြစ်နေတာတွေကို မျက်နှာလေးသွယ်ပီးနုသွားအောင်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ ခွဲစိတ်စရာမလို၊ အချိန်ကုန်ခံ အပြင်သွားပီး treatment လုပ်စရာလည်းမလိုဘဲ အိမ်မှာနေရင်း အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ပဲ လှပသွားစေမှာပါ။ အချိန်သီးသန့်ကြီးပေးစရာမလိုပဲ မျက်နှာမှ ၁နေ့ကို ၁နာရီကပ်ပီး ပတ်ထားရုံနှင့် ၁ပတ်အတွင်းသိသာလာမှာပါရှင်။ ထို့ကြောင့် အလုပ်များပီး အချိန်မပေးနိုင်သူတွေအတွက် အဆင်လည်းပြေစေမှာမို့ ၀ယ်ပီး စမ်းသုံးပီး result ကိုကြည့်လိုက်ကြပါရှင်။ ၁ပတ်ပြည့်လျှင်သိသာပီး ၂ပတ်ပြည့်လျှင်လုံလောက်ပါဘီ။ ၁ပတ်ဆိုသိသားပြီး ၂ပတ်ဆိုလုံလောက်ပါဘီရှင်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်Posted5days, 1 hour ago
View this post on Facebook About Us facebookcollection.net ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က မြန်မာပြည်က facebook page တွေကို ကဏ္ဍ အလိုက် လမ်းညွန်သဘောမျိုး စုစည်းပေးချင်တာပါ ။ ဒီဆိုက်ကို ၀င်လိုက်တာနဲ့ ပြည်တွင်း ၊ ပြည်ပ က facebook page အတော်များများကို တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ facebook page ကို လမ်းညွန်ပေးထားပါတယ်။ မိမိတို့ ရဲ့ facebook page ကို ထည့်သွင်းချင်တဲ့ သူများ အနေနဲ့ လဲ [email protected] ကို မေလ်းပို့ ထားနိုင်ပါတယ်။
သို့သော် ဘာသာရေး ၊ လူမျိုးရေး ၊ ပါတီဝါဒဖြန့်ရေး ၊ over +18 များကိုတော့ လောလောဆယ် မထည့်ပေးပါ ခင်ဗျာ ။
Myanmar Model Boys
Myanmar Mp3 Songs
ဘာသာရေး နှင့် အတွေးအမြင်
ရုပ်သံ ၊ FM လိုင်းများ
ငွေဈေး ၊ ရွှေဈေး ၊ ဖုန်းဈေးနှုန်း ၊ စီးပွားရေး သတင်း
© Facebook Collection Dot Net | cache